Lahatsarin-kira Okrainiana Iray Mahatalanjona Aseho Ao Anatin’ny Efijery Apple Miisa 14 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2017 18:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Swahili, Français, Filipino, বাংলা, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 24 Septambra 2014 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ny lahatsarin-kira “Knock Knock” nojerena tao anatin'ny efijery Apple miisa 14 mba hanarahana ny tantara . Pikantsarin'ny lahatsary tao amin'ny YouTube.
Nahazo ny fon'ny mpijery tao amin'ny Youtube (sy ny mpankafy Apple ) ny tarika mpiangaly rock iray mahaleontena tsy dia malaza loatra ao Okraina niaraka tamin'ny lahatsarin-kira tena hafa kely izay efa nahasarika mpijery dimy hetsy hatramin'izao.
Niantehitra tamin'ny fomba hafahafa iray mba hamokarana ny lahatsarin-kiran'izy ireo mitondra ny lohateny hoe “Knock Knock” ny Brunettes Shoot Blondes, tarika rock avy any Kryvyi Rih, tanàndehibe indostrialy any afovoany atsinanan'i Okraina. Mandefa ny tantara amin'ny alàlan'ny fampiasana ny efijerin'ny fitaovana 14 samihafa ho an'ny marika Apple ny lahatsarin-kira izay maharitra 2 minitra sy tapany: finday, tablety sy solosaina. Miampitampita amin'ny efijery toy ny zavatra majika ireo mpilalao ao amin'ny lahatsary .
Inoana fa naharitra ela ny fanatontosana ny lahatsary satria nilaza ny mpanatontosa fa tao anatin'ny andian-tantara iray no nanaovana izany ary nampiasana fakantsary iray, ary tsy nisy ny fanitsiana. Tantaram-pitiavana mampihetsi-po ny vokatra azo miaraka amin'ny feonkira milantolanto. Tsy isalasalana fa ora maro no namolavolana ny sary sy sarimiaina tao ambadik'izany, ary efa voarindra tsara avokoa ny fandaminana ny fitaovana teo ambony latabatra miaraka amin'ny fotoana azo lazaina ho tonga lafatra.
Raha niparitaka tao amin'ny aterineto ny lahatsary, dia nanontany ny sasany sady nivazivazy raha mety ho dokambarotra ankolaka ho an'ny marika Apple izy ity noho ny fandraisana anjaran'ireo fitaovana Apple ao amin'ny lahatsary. Asa na ahoana ny fanamarihana mety ho ataon'ny Apple : afaka atao dokambarotra tsara ho an'ny Apple ny hira (sy ny lahatsary).